ဝင်​စားလို့ ရတယ်​​လေ…. ဝင်​တည်းလို့ ရတယ်​​လေ ဆိုတဲ့ မကွေးက ထမင်းဆိုင် - Uptodate MM
ပထွေး က သ�...
ဝင်​စားလို့ ရတယ်​​လေ…. ဝင်​တည်းလို့ ရတယ်​​လေ ဆိုတဲ့ မကွေးက ထမင်းဆိုင်
Uptodate MM | August 6, 2019 | ပြည်တွင်းသတင်း | No Comments
ထမင်းကြော်တစ်ပွဲကို ၇၀၀၀ တောင်းတဲ့ မကွေးကားကွင်းနားက ရိုက်စားဆိုင်……ဝင်စားလို့ ရတယ်ပြောတဲ့ ထမင်းဆိုင်ကို ဝင်စားကြည့်လိုက်တော့….(မကွေးကိုလာမယ့်သူများ သတိထားပါ)
မ​ကွေးကိုလာမဲ့ မိတ်​​ဆွေးများသတိထားကြပါ။ မ​ကွေးကားကွင်း အ​ဝေရာလမ်းဘက်​ကို ထွက်​တဲ့အ​ပေါက်​ ​ကောင်းမွန်​​ဆေးရုံဘက်​ကိုထွက်​တဲ့အ​ပေါက်​​ပေါ့ ​ ……
အ​ပေါက်​အထွက်​မှာ ကပ်​လျှက်​က စား​သောက်​ဆိုင်​ ​ရွှေနန်း​တော်​တည်းခိုခန်းနဲ့ တွဲဖွင့်​ထားတဲ့ဆိုင်​ အဝါ​ရောင်​logo ​လေး​တွေနဲ့ဝင်​စားလို့ ရတယ်​​လေ ဝင်​တည်းလို့ ရတယ်​​လေနဲ့ ​ခေါ်တယ်​။
ဒီ​နေ့ မနက်​ဝင်​စားမိတယ်​ ထမင်း​ကြော် ကိုယ်​က ကားကွင်းနားက ဆိုင်​​တွေသိပ်​မယုံလို့ ​ဈေးအရင်​​မေးမိတယ်​ သူက ၅၀၀ တဲ့ထမင်း​ကြော် ကြက်​သား ဆိတ်​သား အမဲသား ဘာစားမလဲ​မေးလို့ ကြက်​သားနဲ့ လို့ ​ပြောလိုက်​တယ်​ ….
ကြက်​သားကို ​ဈေးမ​မေးမိဘူး​ ကျွန်​​တော်​ကလဲ။ခန​နေ ပန်းကန်​​လေး​ပေါ်မှာကြက်​သား လက်​တစ်​ဆစ်​​လောက်​ ၅ တုံး​ ခရမ်းချဉ်​သီး ပါးပါးလှီးထားတာ​လေး​တွေ​ရောပါ​သေး ကိုယ်​စစားပီ​ပေါ့ …..
စားပွဲထိုး​ကောင်​မ​လေးကို ကြက်​သား​ကြော်​က ဘယ်​​လောက်​လဲ​မေး​တော့ ​ကောင်​မ​လေးက သူ​ပြောလို့ မရဘူး ဆိုင်​ရှင်​အ​ဒေါ်မှ​ပြောလို့ ရမှာတဲ့ ကိုယ်​သိလိုက်​ပီ ငါခံရပီ​ဟေ့ဆိုပီး…..
စားပီး​တော့​ဈေး​မေးလိုက်​​တော့ ၇​၀၀၀ တဲ့….. ကြက်​သား​ကြော်​က ၄၅၀၀ ထမင်း​ကြော်​က ၅၀၀ ဟင်းရည်​က ၂ဝဝဝတဲ့ ဟင်း ရည်​က အရံအ​နေနဲ့ ချ​ပေးတာထင်​တာ​လေ …..
ဒါ​တောင်​​ ရေဗူးမ​သောက်​မိ​သေးဘူး ….ကိုယ့်​ဘဝမှာမနက်စာကို ၇၀၀၀​ပေးစားဖူးတာ ဒါပထမဆုံး …..အဲ့ဆိုင်​အ​ကြောင်းသိကြလို့ လားမသိဘူး …..ကိုယ်​အဲ့နား တစ်​​နေ့ လုံးအသွားအပြန်​လုပ်​​နေတာ စားတာ တစ်ယောက်​မှမ​တွေ့ ရဘူး။
ကျွန်​​​တော်​ အ လို့ ကျွန်​​တော်​ခံရပြီးပြီ။ ကျွန်​​တော့်​လို မခံရ​အောင်​ ​စေတနာဖြင့်​ အဲ့ဆိုင်​နဲ့မျက်​နှာချင်းဆိုင်​​မှာလဲ အတူတူ ထင်​တယ်​ ​……ရွှေနန်း​တော်​တည်းခိုခန်းနဲ့ တွဲဖွင့်​ထားတဲ့ဆိုင်​ ……
အဲ့ဆိုင်​လဲ ဝင်​စားလို့ ရတယ်​​လေ ဝင်​တည်းလို့ ရတယ်​​လေနဲ့ ​ခေါ်တယ်​။ logo အဝါ​ရောင်​ ​လေး​တွေနဲ့အ​ဝေရာလမ်း ​ကောင်းမွန်​​ဆေးရုံဘက်​ကို ထွက်​တဲ့အ​ပေါက်​ ကပ်​လျှပ်​ကဆိုင်၊ ရွာကလာတဲ့သူ​တွေ နယ်​ကလာတဲ့သူ​တွေ ကျွန်​​တော်​လို ခံရမှာဆိုးလို့ ပါ။Nay Chit Paing
ထမငျးကွျောတဈပှဲကို ၇၀၀၀ တောငျးတဲ့ မကှေးကားကှငျးနားက ရိုကျစားဆိုငျ……ဝငျစားလို့ ရတယျပွောတဲ့ ထမငျးဆိုငျကို ဝငျစားကွညျ့လိုကျတော့….(မကှေးကိုလာမယျ့သူမြား သတိထားပါ)
မ​ကှေးကိုလာမဲ့ မိတျ​​ဆှေးမြားသတိထားကွပါ။ မ​ကှေးကားကှငျး အ​ဝရောလမျးဘကျ​ကို ထှကျ​တဲ့အ​ပေါကျ​ ​ကောငျးမှနျ​​ဆေးရုံဘကျ​ကိုထှကျ​တဲ့အ​ပေါကျ​​ပေါ့ ​ ……
အ​ပေါကျ​အထှကျ​မှာ ကပျ​လြှကျ​က စား​သောကျ​ဆိုငျ​ ​ရှနေနျး​တျော​တညျးခိုခနျးနဲ့ တှဲဖှငျ့​ထားတဲ့ဆိုငျ​ အဝါ​ရောငျ​logo ​လေး​တှနေဲ့ဝငျ​စားလို့ ရတယျ​​လေ ဝငျ​တညျးလို့ ရတယျ​​လနေဲ့ ​ချေါတယျ​။
ဒီ​နေ့ မနကျ​ဝငျ​စားမိတယျ​ ထမငျး​ကွျော ကိုယျ​က ကားကှငျးနားက ဆိုငျ​​တှသေိပျ​မယုံလို့ ​စြေးအရငျ​​မေးမိတယျ​ သူက ၅၀၀ တဲ့ထမငျး​ကွျော ကွကျ​သား ဆိတျ​သား အမဲသား ဘာစားမလဲ​မေးလို့ ကွကျ​သားနဲ့ လို့ ​ပွောလိုကျ​တယျ​ ….
ကွကျ​သားကို ​စြေးမ​မေးမိဘူး​ ကြှနျ​​တျော​ကလဲ။ခန​နေ ပနျးကနျ​​လေး​ပျေါမှာကွကျ​သား လကျ​တဈ​ဆဈ​​လောကျ​ ၅ တုံး​ ခရမျးခဉျြ​သီး ပါးပါးလှီးထားတာ​လေး​တှေ​ရောပါ​သေး ကိုယျ​စစားပီ​ပေါ့ …..
စားပှဲထိုး​ကောငျ​မ​လေးကို ကွကျ​သား​ကွျော​က ဘယျ​​လောကျ​လဲ​မေး​တော့ ​ကောငျ​မ​လေးက သူ​ပွောလို့ မရဘူး ဆိုငျ​ရှငျ​အ​ဒျေါမှ​ပွောလို့ ရမှာတဲ့ ကိုယျ​သိလိုကျ​ပီ ငါခံရပီ​ဟဆေို့ပီး…..
စားပီး​တော့​စြေး​မေးလိုကျ​​တော့ ၇​၀၀၀ တဲ့….. ကွကျ​သား​ကွျော​က ၄၅၀၀ ထမငျး​ကွျော​က ၅၀၀ ဟငျးရညျ​က ၂ဝဝဝတဲ့ ဟငျး ရညျ​က အရံအ​နနေဲ့ ခြ​ပေးတာထငျ​တာ​လေ …..
ဒါ​တောငျ​​ ရဗေူးမ​သောကျ​မိ​သေးဘူး ….ကိုယျ့​ဘဝမှာမနကျစာကို ၇၀၀၀​ပေးစားဖူးတာ ဒါပထမဆုံး …..အဲ့ဆိုငျ​အ​ကွောငျးသိကွလို့ လားမသိဘူး …..ကိုယျ​အဲ့နား တဈ​​နေ့ လုံးအသှားအပွနျ​လုပျ​​နတော စားတာ တဈယောကျ​မှမ​တှေ့ ရဘူး။
ကှ​နျြ​​​တျော​ အ လို့ ကြှနျ​​တျော​ခံရပွီးပွီ။ ကြှနျ​​တျော့​လို မခံရ​အောငျ​ ​စတေနာဖွငျ့​ အဲ့ဆိုငျ​နဲ့မကျြ​နှာခငျြးဆိုငျ​​မှာလဲ အတူတူ ထငျ​တယျ​ ​……ရှနေနျး​တျော​တညျးခိုခနျးနဲ့ တှဲဖှငျ့​ထားတဲ့ဆိုငျ​ ……
အဲ့ဆိုငျ​လဲ ဝငျ​စားလို့ ရတယျ​​လေ ဝငျ​တညျးလို့ ရတယျ​​လနေဲ့ ​ချေါတယျ​။ logo အဝါ​ရောငျ​ ​လေး​တှနေဲ့အ​ဝရောလမျး ​ကောငျးမှနျ​​ဆေးရုံဘကျ​ကို ထှကျ​တဲ့အ​ပေါကျ​ ကပျ​လြှပျ​ကဆိုငျ၊ ရှာကလာတဲ့သူ​တှေ နယျ​ကလာတဲ့သူ​တှေ ကြှနျ​​တျော​လို ခံရမှာဆိုးလို့ ပါ။Nay Chit Paing
ဘုရင့်နောင် One Stop Mart ကို ဓားပြတိုက်သည့် တရားခံ ၂ ဦးအား ဖမ်းမိ
Victoria လေးရဲ့အမေနေရာမှာဆိုရင် ကိုယ်တိုင်သတ်ပြီးမှ ထောင်ထဲဝင်မယ်ဆိုပြီး ပြောလိုက်တဲ့ ခင်ဇာခြည်ကျော်
နေ့လည်တုန်းက ဆိုင်ကယ်နဲ့ မိန်းနားသွားရင်း ဘီးပေါက်ပါလေရော…
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပညာရေးကို အကောင်းဆုံးအကျိုးပြုမဲ့ ပညာရေးသံအမတ်အဖြစ်ခန့်အပ်ခံလိုက်ရတဲ့ ချစ်သုဝေ
ဆရာတော် တစ်ပါးထဲ စကားပြောနေ ဟ န်တွေ့ ရ သဖြင့် ကင်မရာနဲ့ ရိုက်လိုက်သော အခါ ဇော်ဂျီ တစ်ပါးကို အံ့သြစွာတွေ့လိုက် ရ တဲ့ ထူးခြား တဲ့ ခမုံဆရာတော်
အ ဆိုတော် ဘန်နီဖြိုး ကို သီဆိုပြ ခဲ့ တဲ့ ချစ် စရာ ကျောင်းသားလေး ရဲ့ Video လူကြိုက် များနေ
ပထွေး က သမီး ကို မလိုချင် လို့ဆိုပြီး မိဘမဲ့ဂေဟာတွင် လာေ ရာက် စွန့်ပစ် ခဲ့တဲ့ မိခင်
အမျိုးသား(ကွာရှင်းထားပြီး)ဖြစ်သူ လာရောက်ေ ခ်ါဆောင် သွားပြီး ပြန်တွေ တဲ့ ချိန် မှာေ တာ့ မီးလောင် ဒဏ် ရာ များ နဲ့
” ဘူး သီးနုနု ခူး စား မိ လို့ သိန်း တ စ်ထောင်ကျော် အ လိမ် ခံ လိုက် ရ တဲ့ ဘိုးတော်”
လှ တဲ့ မိန်း မတွေ က ယောင်္ကျား ကံ မကောင်း ဘူး လို့ ဒဲ့ပြော လာ တဲ့ သရုပ်ဆောင် မယ်လိုဒီ